Maamulka gobolka Cayn oo ku’eedeeyay Somaliland inay faragalin ku samaysay mashaaric QM uu ka fulinayay gobolkaas • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Maamulka gobolka Cayn oo ku’eedeeyay Somaliland inay faragalin ku samaysay mashaaric QM uu ka fulinayay gobolkaas
Gudoomiyaha gobolka Cayn ee aamulka Puntland Xariir Maxamuud Axmed oo waraysi siinayay Horseed Media aya sheegay in saraakiil ka socota hay’adda UNICEF oo doonayay in ay shaqo ka bilaabaaan gobolka Cayn ay saraakiil ka tirsan xafiiska UNICEF ee magaalada Hargaysa ee maamulka somaliland ay ku amreen in ay joojiyan shaqada ay doonayeen in halkaasi laga bilaabo.
Wuxuu intaasi ku daray in arinkaasi uu yahay mid siyaasadeed oo daba jooga colaad horay uga dhacday gobolka Cayn islamarkaana lagu doonayo in lagu curyaamiyo horumarka gobolka Cayn.
“…..anagu horay uma arag hay’ad nooga timaada Hargaysa,hay’aduhu waxay nooga iman jireen Puntland,waayo waxaan ka tirsanahay Puntkand”ayuu yiri.
Waxaa sheegid mudan in saraakiisha hay’adda UNICEF ee gaaray gobolka Cayn aysan wax shaqo ah ka bilaabin waqtigan gobolka Cayn,waxaana laga warsugayaa amar ka soo baxa xafiiska UNICEF ee wadanka Kenya.
Arintan ayaa waxaa ka carooday maamulka iyo isimada oo war qoraala oo ay u gudbiyeen hay’adda UNICEF saraakisheeda ugu saraysa u cadeeyay in gobolka Cayn uu ka tirsan yahay Puntland islamarkaana hay’adaha ka hawl galaya gobolka looga baahanyahay in ay ka yimaadaan xarumaha ay ku leeyihiin hay’adaha deegaanada Puntland.
Hay’adda UNICEF ayaa u jeedada ay u tagtay gobolka Cayn wuxuu salka ku hayaa xog ururin ay doonayso in ay hayadu ay ka samayso waxyaabaha ay horay uga qabatay gobolka iyo baahiyaha uu qabo gobolka Cayn ee la doonayo in la qabto mustaqbalka dhow.